Wednesday May 27, 2020 - 20:24:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
ilo wareedyo ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay maalmihii lasoo dhaafay hirgelisay buunddo dhanka hawada ah oo labada dal si toos ah isugu xiraysa,diyaaradaha xamuulka ah ee melleteriga turkiga ayaa boqolaal gaadiid gaashaaman ah iyo saanado melleteri udaad guraynaya magaalada Misraatah oo ah magaalada sedaxaad ee Liibiya ugu weyn.
Diyaarado nuucoodu yahay C-130 ayaa gaadiid nuuca aan xabaddu karin ah iyo shixnado kale oo melleteri ka dajiyay garoonka diyaaradaha caalamiga misraatah oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada turkiga ay ku leeyihiin dalka Liibiya.
Sidoo kale diyaarado nuucoodu yahay Q Globemaster oo ay leedahay dowladda Qadar ayaa la sheegay in ay qalab melleeteri geeyeen dalka Liibiya, khubaro melleteri oo Russian ah ayaa lagasoo xigtay in turkigu uu magaalada misraata ku rakibay manduumada difaaca cirka ee loo yaqaan MIM-23 taas oo awood uleh in ay dhulka soo dhigto diyaaradaha dagaalka.
Qalabkan lidka diyaaradaha uu Turkigu geeyay Liibiya ayaa isbuucyo ka hor lagusoo riday laba diyaaradood Drone ah oo ay farsamaysay dowladda Shiinaha, wararka ayaa intaas ku daraya in melleteriga Turkiga uu diyaaradaha casriga ah ee aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Bayraktar uu ku xoojiyay saldhiggiisa kuyaal magaalada caasimadda ah ee Daraabulis.
Sare uqaadidda awoodda melleteri ee Turkiga Liibiya ayaa imaanaysa maalmo kadib markii uu dagaal ooge xaftar ku hanjabay in uu qaadi doono weeraro ka ooyinsiiya Rajeb dayib erdogaan sida uu hadalka udhigay.
Sedax dowladood oo kala ah Talyaaniga,Turkiga iyo Qadar ayaa taageero hagar la'aaneed siinaya xukuumadda isku magacaawday Alwifaaq ee fadhigeedu yahay magaalada Daraabulis halka xaftar uu taageero ka heysto dowlado ay kamid yihiin Faransiiska,Imaaraatka carabta,Ruushka,Masar,Sacuudiga iyo Suudaan.